Xubuntu Core, kubvisa zvakawedzera kuchengetedza iyo ISO ye600 MB | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva ano isu tese takashandiswa zvakanyanya kumhanyisa kumhanyisa kumhanyisa uyezve nekuve nemapenduru anotipa 8 kana 16 GB yekuteedzera ese mafaera maari. Nekudaro, zvinonzwisisika izvo Linux ISO zvave zvichikura muhukuru, asi hatifanire kukanganwa kuti kana yedu yekushandisa system iine chimwe chinhu, iwoyo mweya wepasirese uye iri chaizvo mukutsvaga kuti urambe uri sarudzo yezvose izvo imwe nguva yapfuura iyo yakatanga kutaura nezvekuchengetedza saizi yeiyo ISO mudanho rinogamuchirwa.
Muchitima ichocho ndimo kubva kuXubuntu vanozivisa kuvhurwa kwe Xubuntu Core chirongwa. Icho chiri yakapfupiswa vhezheni yeXubuntu mune zvine musoro iyo desktop yeXFCE inochengetwa pamwe chete nezvimwe zvinhu zvikuru kuti zvipe iyo inobata iyo Canonical inoziva kuipa, asi kubvisa zvese zvimwe kuchengetedza saizi yeIO padyo ne600MB, semuenzaniso multimedia mapakeji kana kunyorera kweavo vanogara zvakanyanya.
Nekudaro zvinowanikwa kwete chete kuenderera kuve izvo zvidiki zvakakwana kuti zvikwane paCD asiwo mukati memiganhu inogamuchirwa yekurodha pasi kwete zvakanyanya kumhanya senge izvo zvinowanzo kuwanikwa munyika zhinji uko mukana wekuwana kune matsva matekinoroji chinhu chevashoma (kunyanya nekuda kwemitengo yakakwira inobatwa ipapo). Izvo kana, kunyangwe zvingareve zita rayo, Xubuntu Core haina hukama nechero nzira kuUbuntu Snappy CoreIro zita 'musimboti' rave richishandiswa kwemakore mazhinji muLinux (zvirokwazvo iyo gnome-core package iripo chaizvo kuti ione zvakakosha zvinhu zveiyo GNOME desktop).
Xubuntu Core ichave yechokwadi painosvika Wily werewolf, asi unogona kutomboedza Xubuntu Core paVivid Verbet. Kune izvi iwe unofanirwa teerera iyo Ubuntu Minimal ISO, network inosimudza iyo inorodha pasi chete izvo zvakakosha, uye wosarudza sarudzo 'Xubuntu Minimal Kuisa' kana 'Xubuntu kushomeka kuisirwa' kana isu tine iyo yekumisikidza muSpanish. Ehe, pane zvekare mamwe maumbirwo akagadzirwa nharaunda, senge iyo yatakasiya mairi Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Xubuntu Core, kubvisa zvinowedzera kuchengetedza 600MB ISO